Waa kuma gaasimaha cusub ee uu madaxweyne Farmaajo u magacaabay warfaafinta Madaxtooyada? | Dooxo Diaspora Forum - Golaha Qurbo Joogta Dooxa
Home Articles Waa kuma gaasimaha cusub ee uu madaxweyne Farmaajo u magacaabay warfaafinta Madaxtooyada?
Waa kuma gaasimaha cusub ee uu madaxweyne Farmaajo u magacaabay warfaafinta Madaxtooyada?
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magacaabay afhayeenkiisa cusub ee agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Soomaaliya.
Qoraal Ingiriis lagu qoray oo lagu baahiyey barta Madaxtooyada Soomaaliya ee Twitter-ka ayaa lagu shaaciyey magacaabidaan iyadoo lagu shegeay in Cabdirashiid Maxamed Xaashi loo magaacaabay Agaasimaha cusub ee Warfaafinta Madaxtooyada, isagoo hore u ahaa ku xigeenka Agaasimaha.
Xilka waxaa dhowaan banneeyay Cabdinuur Maxamed oo noqday Agaasime ku xigeenka Madaxtooyada, siina wada xilka agaasimaha markii uu xilkaasi banneeyay Dr. Nuur Diiriye Fuursade oo xilka uga tegay khilaaf dhex maray Madaxweyne Farmaajo.
Agaasimaha cusub ee Warfaafinta Madaxtooyada C/rashiid Maxamed Xaashi ayaa xilka agaasime ku xigeenka Warfaafinta Madaxtooyada July 2019, wuxuuna hore uga howlgeli jiray Diiwaan Films oo baraha bulshadana ku faafin jirtay muuqaallo lagu taageerayo Madaxtooyada.
Agaasimihii hore ee waaxda warfaafinta Cabdinuur Maxamed ayaa u rajeeyay agaasimahan cusub in xilkiisa uu Alle u fududeeyo.